DEADLINE DAY: Liiska 11-ka Ciyaartoyda Ee Ay Kooxaha Premier league Maanta Oo Suuqu Xidhmayo Ay Dhamaystiri Karan Iyo Xidigaha Muhiimka Ah Ee Lala Kala Wareegi Karo. - GOOL24.NET
DEADLINE DAY: Liiska 11-ka Ciyaartoyda Ee Ay Kooxaha Premier league Maanta Oo Suuqu Xidhmayo Ay Dhamaystiri Karan Iyo Xidigaha Muhiimka Ah Ee Lala Kala Wareegi Karo.
Suuqa kala iibsiga Premier leaugue ayaa si rasmi ah u xidhmaya maanta oo khamiis ah waana maalinta ugu danbaysa suuqa xagaaga ee England kadib markii dhamaadkii xili ciyaareedkii hore ay kooxaha England go’aan ku gaadheen in suuqu xidhmo 48 saacadood ka hor marka uu furmayo xili ciyaareedka cusub ee Premier league.
Iyada oo jimcaha barri uu si rasmi ah furmi doono xili ciyaareedka cusub ee Premier league waxa uu suuqa England ee xagaagu xidhmayaa 5:00 galabnimo ee saacada London oo ku beegan 7 fiidnimo ee saacada geeska Afrika, waana waqtigan muddada ay haystaan kooxaha Premier league si ay u sameeyaan saxiixyo muhiim ah.
Haddaba waxaanu halkan si kooban idiinku soo gudbinaynaa liiska ciyaartoyda maanta oo khamiis ah oo uu suuqa kala iibsiga Premier league xidhmayo ay la saxiixan karaan kooxaha horyaalka Ingiriisku kuwaas oo haddaba qaarkood ay ku dhaw yihiin in ay u wareegaan kooxo cusub.
11-Oleksandr Zinchenko: Manchester City ⇒ Wolves
Zinchenko ayaa xili ciyaareedkii la soo dhaafay door muhiim ah ka soo ciyaaray kooxda Manchester City wuxuuna si laayableh u buuxiyay booska uu ka dhaawacnaa Benjamin Mendy laakiin iyada oo kooxda Wolves heshiis 16ka milyan gini ah la gaadhay waxa uu hore go’aan ugu gaadhay in uu sii wato Man City.
Laakiin Zinchenko oo ka maqnaa kooxdii uu Guardiola u soo xushay koobkii Community Shield ayaa u muuqda in maanta uu ka bixi doono Etihad Stadium. Zinchenko ayaa la filayaa in uu u dhaqaaqi doono kooxda Wolves.
10-Danny Welbeck: Arsenal ⇒ Everton,⇒Southampton, ⇒ West Ham
Danny Welbeck ayaa dhibane u noqday isbadalka kooxdiisa waxaana la filayaa in maanta oo khamiis ah uu ka bixi karo Emirates Stadium waxaana ku dagaalamaya kooxaha Everton, Southampton iyo West Ham United.
Unai Emery ayaa doonaya in iibka Danny Welbeck uu lacag kala soo baxo si uu u samayn karo saxiix hal difaac oo uu kooxdiisa ku soo xoojin karo taas oo la doonayo in ay maanta suurtogal noqon karto inta aanu suuqu xidhmin.
9-David Ospina: Arsenal ⇒ Besiktas
Imaatinka goolhayaha ree Germany ee Bernd Leno ee kooxda Arsenal ayaa xaaladii David Ospina ee Gunners sii xumeeyay waxaaa la filayaa in maanta inta aanu suuqu xidhmin uu ku biiri doono kooxda ree Turkey ee Besiktas iyada oo Petr Cech iyo Bernd Leno ay noqon doonaan labada goolhaye ee uu Emery ku shaqayn doono.
8-Yannick Bolasie: Everton ⇒ Middlesbrough
Yannick Bolasie oo ka mid ahaa ciyaartoyda ugu xawaaraha dheereeya isla markaana ugu gambiska badnaa Premier league ayaa laba sano ka hor ku biiray Everton laakiin waxaa waayihiisii ciyaareed burburiyay dhaawac halis ahaa oo soo gaadhay isaga oo 32 kulan oo kaliya u soo saftay kooxda Toffees.
Yannick Bolasie ayaa hadda u muuqda mid heer hoose u socda waxaana lala xidhiidhinayaa kooxda Championshipka heerka labaad ee Middlesbrough iyada oo maanta heshiiskiisa la dhamystiri karo.
7-Yerry Mina: Barcelona ⇒ Everton
Kooxaha Barcelona iyo Everto ayaa xidigii labaad ka heshiiyay iyada oo Yerry Mina uu Goodinson Park kula midoobi doono Lucas Digne oo isna dhawaan Camp Nou kaga soo biiray Everton. Everton ayaa 32 milyan gini ka bixinaysa difaaca ree Colombia oo ay hore Man United u doonaysay waxaana la sugayaa in maanta heshiiskiisa lagu dhawaaqi doono.
6-Steven N’Zonzi: Sevilla ⇒ Arsenal
Unai Emery ayaa markale doonaya in uu Emirates Stadium dib ugula midoobo xidiga khadka dhexe ee xulka qaranka France iyo kooxda Sevilla ee Steven N’Zonzi. Gunners ayaa maanta dhamaystiri karta saxiixa Steven N’Zonzi iyada oo 29 sano jirkani uu doonayo in uu ka baxo Sevilla.
5-Jack Grealish: Aston Villa ⇒ Tottenham
Gudoomiyaha kooxda Tottenham ee Daniel Levy ayaa ilaa maalinta ugu danbaysa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda la sugayay in uu sameeyo saxiixa kowaad ee kooxdiisa ee xili suuqan waxayna Spurs maanta doonaysaa in ay dhamaystirto heshiiska xidiga kooxda Aston Villa ee Jack Grealish inkasta oo Aston Villa ay si wayn u diidan tahay.
4-Toby Alderweireld: Tottenham ⇒ Manchester United
Manchester United iyo Tottenham ayaa wada xaajoodyo ka yeeshay iibka Alderweireld laakiin ilaa hadda Tottenham oo aan badalkiisa haysan ayaa xidiga ree Belgium ka hortaagan in uu Old Trafford ku biiro laakiin Jose Mourinho oo si wayn u raadinaya difaac dhexe ayaa Alderweireld dhawr bilood ka hor magiciisa u gudbiyay maamulka kooxdiisa.
Toby Alderweireld ayaa ka mid ah saxiixyada la filan karo in maanta oo suuqa ugu danbaysa la dhamaystiri karo haddii ay kooxaha Manchester United iyo Tottenham heshiis buuxa ka gaadhaan iyada oo 12 bilood kadib Alderweireld lagu iibsan karo 25 milyan gini oo kaliya maadaama oo ay heshiiskiisa ku jirto.
3-Layvin Kurzawa: PSG ⇒ Man United
Manchester United ayaa xalay wada xaajoodyo la yeelatay kooxda PSG waxayna ka doonaysaa difaaca Layvin Kurzawa kaa soo ay diyaar u tahay in ay ka soo bixiso 22 milyan gini waxaana la sugayaa haddii PSG ay qabli doonto dalabka Man United ay ku doonayso in maanta ay ku dhamaystirto heshiiska Layvin Kurzawa.
2-Ousmane Dembele: Baracelona ⇒ Arsenal
Arsenal ayaa doonaysa in ay maanta kooxda Barcelona ku qanciso in ay Ousmane Dembele ku siiso heshiis amaah ah inkasta oo uu xidiga ree France ku adkaystay in uu sii joogayo Camp Nou isla markaana uu diyaar u yahay finalka Spanish Super Cupka.
Iyada oo Ousmane Dembele uu xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ku soo dhibtooday Barca isla markaana ay la soo wareegtay Malcom ayay Gunners doonaysaa in maanta ay heshiis amaah ah ku soo qaadato.
1-Nabil Febir: Lyon ⇒ Chelsea
Chelsea ayaa maanta doonaysa in ay saxiixyo kale samayso kadib markii ay isku hubsatay Kepa, Jorginho iyo Kovacic oo ay heshiis amaah kula soo saxiixatay waxayna Chelsea doonaysaa in ay la soos saxiixato xidigii Liverpool tijaabada caafimaadka u maray ee Nabil Fekir kaas oo ay kooxda Lyon ku qiimaynayso 60 milyan euros.
Jamaahiirta Ronaldo Oo Barta Twitterka Kaga Falceliyay Doodii Luka Modric vs Cristiano Ronaldo Kadib Xaalada Waalida Ah Ee Ay Real Madrid Gashay.
Kumuu Ahaa Shaqsigii Uu Jose Mourinho Ku Sigtay Inuu Dagaal Gacan Ka Hadal Ah La Galo Dhammaadkii Kulankii Chelsea, Muxuuse Ka Yidhi Dhacdadaas.
Manchester City Oo Etihad Stadium Dhex Jiid-Jiiday Kooxda Burnely Xilli SHAN Xiddig Oo Kala Duwan Oo Citizens Ah Ay Shabaqa Soo Taabteen.